On: २०७७ माघ ८ गते, बिहीबार, ०७:१८ बजे प्रकाशित
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद किनबेचको फाेहाेरी श्रृंखला सुरु हुने प्रयास भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गरेका छन्।
प्रेस संगठन नेपालको आफू पक्षीय भेलालाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले आफूले लेफ्टलाई जोडेर त्यसको प्रयास गरेको भए पनि त्यसलाई असफल पार्ने काम भएको दाबी गरे।
‘मैले प्रयास गरेको थिए। लेफ्ट पार्टी जोडेर भौगोलिक अखण्डाको रक्षा गरोस्। स्वाभिमान माथि उठाओस् र देशको विकासमा योगदान गरोस्। त्यस्तो पार्टीको परिकल्पना गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘पार्टी देखिहाल्नु भयो। एक दिन एउटा राम्रो कामको प्रशंसा गर्न नसक्ने हुतिहारा। देशका निम्ति मर्ने होइन आफन्तका निम्ति मर्ने!’
उनले प्रण्डलाई परिवारवादको आरोप लगाउँदै भने, ‘केपी ओलीका छोराछोरी छैनन्। मेरा त ज्वाइँहरु छैनन्। छोरी मेयर बनाउनै पर्‍यो। नजिते मतपत्र च्यात्नै पर्‍यो। ज्वाईँलाई घर किन्दिनै पर्‍यो,’ उनले अगाडि भने, ‘मलाई सन्चै छ।
अन्य सम्बन्धित समाचार: कम्युनिष्ट फेल भइसकेका छन्ः वरिष्ठ नेता पौडेल
यो देशका सबै केटाकेटीलाई आफ्नै ठान्छु। उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्‍याउने योद्धाहरुका छोराछोरी छन् कि छैनन्? लड्ने बेलामा अरुका छोराछोरी चाहियो। आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशमा पढाउने। अरुका छोराछोरीका पनि ज्यान हुन्। त्यो काठको बनाएको हो? अरुका छोराछोरी बेच्न राखेको पुतली हुन्?’
२०७७ माघ ८ गते, बिहीबार, ०७:१८ बजे प्रकाशित